किन भाँडिदैछ कांग्रेसी जागरण अभियान ? – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
किन भाँडिदैछ कांग्रेसी जागरण अभियान ?
काठमाडौं । सत्ता पक्षको बल मिचाइँका कारण देशको शासन प्रणालीाथि नै समस्या आएको भन्दै देशव्यापी जनजागरण अभियानमा जुट्न थालेको नेपाली कांग्रेस आफ्नै आन्तरिक विवादका कारण गुटहरुबीच झडपमा उत्रिएको छ । प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेका बेला कांग्रेस आफैमा आन्तरिक भिडन्तमा उत्रनु जनताका लागि आश्चर्यको खेती जस्तो हुन पुगेको छ ।
जागरणका लागि मञ्चमा उपस्थित नेता तथा कार्यकर्ता नै मारपीटमा उत्रिन थालेपछि यसले अघि बढाउने भनेको जनजागरण अभियान बीचैमा तुहिने संकेत देखिएको छ । अभियानको सुरुआतमै सिन्धुपाल्चोकका कांग्रेसका कार्यकर्ताबीच कुटाकुट र नेताहरुबीच मञ्चमा नै भनाभन भएको छ । हात हालाहाल हुँदा एक जना कार्यकर्ता घाइते भएपछि स्थिति अझै तनावग्रस्त भएको थियो ।
दुई खेमामा बाँडिएका कार्यकर्ताहरु सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर रहेको बताइएको छ । कांग्रेसी विवाद केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भइरहेको र कार्यकर्ता पनि एकापसमा विभाजित हुन गएकाले देशभर देउवा र पौडेलका आआफ्ना समानान्तर समितिहरु रहेका छन् ।
यी समानान्तर समितिका नेता तथा कार्यकर्ताका बीचमा हुन जाने सानो पनि विवादले कार्यकर्ताबीच गम्भीर खालका झडपहरु निम्त्याइरहेको छ । सिन्धुपाल्चोकमा जागरण अभियान मञ्चमा नै कुटाकुट हुँदा तरुण दल सिन्धुपाल्चोक एक नम्बर क्षेत्रका समानान्तर समितिका अध्यक्ष चोकबहादुर श्रेष्ठ रहेका छन् । जागरण अभियानमा उपस्थित स्थानीय जनता भागाभाग हुँदा पनि केही त सामान्य घाइते भएका थिए ।
हाल कांग्रेसभित्र वाम कांग्रेस र कांग्रेस गरी एक अर्कालाई आरोप लगाउने गरिरहेका छन् । उनीहरुका अनुसार तात्कालीन माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीचमा स्थानीय गठबन्धन भएपछि र स्थानीय निर्वाचनलगत्तै कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटेर वाम गठबन्धन भएपछि कांग्रेसीहरु दुई जबर्जस्त खेमामा बाँडिएका छन् । प्रदेश र संघको निर्वाचनमा लज्जाजनक हार भएपछि कांग्रेसी विवावदले पछि झनै उग्र रुप लिन पुगेको हो ।
कांग्रेसी विश्लेषका अनुसार यो विवादविचारसँग जोडिएको विवाद भएकाले लामो समयसम्म चल्ने र उस्तै परे विचार विवादले कांग्रेसी फुटसम्म पनि पुर्याउन सक्ने बताएका छन् । परस्पर विरोधी र उल्टो धारमा रहेका पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाको वैयक्तिक स्वार्थका कारण हुन गएको स्थानीय चुनावी एकता र कांग्रेसी विवाद अझ आउँदा केही दशकसम्म निरन्तर चलिरहने र कित्ताबन्दी भइरहने विश्लेषकहरुको दाबी रहेको छ ।